Marigny Calculator: sida loogu isticmaalo qaaciddada 'Marigny' ee sharadka iyo roulette
Horay waad u ogtahay waxa loogu talagalay e sida loo isticmaalo qaaciddada 'Marigny'?
Marigny de Grilleau (1855-1942) wuxuu ahaa arday ka mid ah roulette, si fiican loogu xasuusto buugiisa Le faa'iido Scientificqueque d'une seule unitè, nooc ka mid ah qoraalka muqaddaska ah ee taageerayaasha ciyaarta 'xitaa tiro' ama ansaxnimada 'xulashada garaacista'.
Daraasadihiisii ​​waqtigaas ayaa u horseeday inuu falanqeeyo waxa uu u qaatay cidhibta Achilles ee roulette, taasi waa: nusqaamaha.
Si loo fahmo haddii farqiga (farqiga) la arkayo uu ku dhacayo nidaamka caadiga ah ama haddii aad ku jirto xaalad xaddidan oo uu ka faa'iideysan karo ciyaaryahanka, Marigny wuxuu soo saaray qaacido fudud, oo cadeyneysa in farqiga u dhexeeya labada fursadood ee iska soo horjeedaa uusan waligood dhaafin shan jeer xididka laba jibaaran ee isku dayga la arkay.
Tusaale ahaan, 100 wareegyada wareega ah (xididka laba jibbaaran ee 100 = 10) farqiga xadka Marigny waa 5 x 10 = 50.
200 oo istaroog (xidid laba jibbaar ah 200 = 14,14) leexashada xadka waa 5 x 14,14 = 70,7.
Si loo go'aansado sidaas darteed isku dheelitirnaanta farqiga aan fiirineyno, waxaan isticmaali karnaa qaaciddada soo socota, taas oo dhab ahaan u habboon dhammaan isku-darka roulette ama ciyaar kasta oo kale sidaas darteedna kaliya maahan fursado fudud, sida lagu qiimeeyay waqtigaas Marigny.
Sida loo isticmaalo qaaciddada 'Marigny': sharaxaadda qaaciddada
CM= Isugeynta iskucelceliska;
P = Suurtagalnimada isku darka (adoon tixgelin eber);
N = Wadarta isku dayga la arkay;
C = Tirada sortaaga ee fursada la arkay.
Tusaale ahaan, wareegga 200 oo wareega ah ee roulette, waxaan diiwaangelineynaa in lixaad kii shanaad uu soo baxay 16 jeer: kani ma xadka ayaa ku kala duwan?
Adiga oo aan madaxaaga wax badan ka jabin xisaabinta, waad isticmaali kartaa Marigny Calculator, laga soo dejin karo xiriirka hoose iyo mahadsanid taas oo aad dhab ahaantii caddeyn karto xaaladda ma aha oo kaliya Roulette, laakiin sidoo kale ciyaaraha kale, oo ay ku jiraan sharadka isboortiga.
Tusaalaha kore, qiimaha barnaamijku soo celiyaa waa 4,2458 waana hubaal inuu sarreeyo, laakiin wali wuu ka fogyahay xadka 5.
Sida loo istcimaalo qaaciddada 'Marigny formula': codsashada sharadka ciyaaraha
Isboortiga khamaarista xisaabtu waa isku mid, waxaad u baahan tahay inaad saxdo jeegga kor ku xusan (Isboortiga Ciyaaraha) oo aad gasho qiyamka, oo ay ku jiraan qallafsanaantii aad ku ciyaartay bilowgii, taas oo kiiskan loo fahmi doono inuu yahay iskucelcelis dhexdhexaad ah (Avg Odd).
Laakiin maxay tahay faa'iidada loo leeyahay in la ogaado isku dheelitirka Marigny ee qamaarka kubada cagta?
Dabcan waligeen ma yeelan doonno talooyin toos ah oo ku saabsan sharadkeena, laakiin barnaamijkan loogu talagalay sharadka ama roulette wali waad qiimeyn kartaa (mana ahan wax yar) waxtarka habka / xulashada aad codsaneyso.
Xaqiiqdii, haddii aad rabto inaad haysato 'ku dhowaad hubaal' caddayn ah inaad garaacday roulette ama ciyaar kasta oo kale ama buug-yaraha habkaaga, hubaal waa aaladda Marigny Calculator waxay noqon doontaa qalab wax lagu cabiro iyo caddeyn sax ah.
Xaqiiqdii, haddii adoo galaya natiijooyinka lagu diiwaangeliyey habkaaga qamaarka isboortiga waa inaad heshaa qiimo CM oo u dhigma ama ka weyn 5, waxaad si dhab ah uga fiirsan kartaa inaad ballansato dalxiiska Caribbean-ka ama gaariga raaxada ee aad waligaa ku riyoon jirtay!
Soo Degso Fayl	Marigny.zip - 1 MB